सेमेल्ट विशेषज्ञद्वारा स्पष्ट गरिएको सेतो टोपी र कालो टोपी एसईओ
त्यहाँ धेरै प्रविधिहरू छन् जुन वेबसाइटको खोजी ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरूमा सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्राविधिक छनौटले निर्धारण गर्दछ कि खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको प्रकार व्हाइट ह्याट एसईओ वा कालो ह्याट एसईओ हो । यी दुबै प्रकारले तपाईंलाई नतिजा दिनेछ, तर एउटा खोज इन्जिनबाट अर्कोमा पेनाल्ट आकर्षित गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। वेबसाइट मालिकहरूले यी दुई प्रकारका एसईओलाई बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ ताकि तिनीहरू मध्ये कुनै पनि छनौट गर्दा उनीहरूले के आशा गर्ने भनेर जान्छन् र उनीहरूले लिइरहेका जोखिम बारे सजग हुन्छन्।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक फ्रान्क Abagnale, यहाँ यी दुई SEO प्रविधि बीचको भिन्नता वर्णन गर्दछ।
ह्वाइट ह्याट एसईओ ले प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ जुन मानव श्रोताहरूलाई लक्षित खोज ईन्जिनको विपरित हो। ती साइट र गुणस्तर (साइट र यो सामग्रीको) मा जैविक ट्राफिक उत्पन्न गर्न डिजाइन गरिएको हो ठूलो महत्त्वको छ। यी प्रविधि र रणनीतिहरूलाई वेबसाइटको स्तर र यसैले व्यापारको दीर्घकालीन सुधारको लागि रुचाईन्छ।
व्हाइट ह्याट एसईओ टेक्निकले उच्च-गुणवत्ता ईनबाउन्ड लिंकहरू सुरक्षित गर्नु, मूल र आकर्षक सामग्रीको सिर्जना, उचित कुञ्जी शब्द प्रयोग, र उत्कृष्ट साइट संगठन समावेश गर्दछ। अत्यधिक संलग्न अभियानहरू साइटको लागि ट्राफिक उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ तर परिणाम लामो समयसम्म दिगो हुन्छ।
ब्ल्याक ह्याट एसईओ मा उच्च खोज रैंकिंग प्राप्त गर्न खोज ईन्जिन एल्गोरिदममा कमजोरीहरूको फाइदा लिनको लागि प्रविधिको प्रयोग समावेश छ। प्रविधीहरूले मानव दर्शकलाई ध्यान दिदैनन् र प्राय: खोज इञ्जिन नियमहरू तोड्दछन्। ब्ल्याक ह्याट एसईओ खोजी ईन्जिनहरूले अनैतिक मानीन्छ। यी प्रविधिको प्रयोगले गर्दा, साइटलाई यी इन्जिनहरू द्वारा दण्डको जोखिममा राख्छ, र दण्ड इन्जिनको रूपमा खोजी इञ्जिनबाट प्रतिबन्धित जत्तिकै भयानक हुन सक्छ। यस प्रकारको एसईओ सामान्यतया व्यक्तिद्वारा प्रयोग गरिन्छ जुन वेबसाइट बिस्तारै र स्थिर रूपमा बढ्दै जानुको सट्टा द्रुत फिर्ती प्राप्त गर्न चाहन्छ।
केहि कालो टोपी एसईओ टेक्निकले कीवर्ड स्टफिंग, सामग्री स्वचालन, क्लोकि,, ढोकावे पृष्ठहरू, र अदृश्य लिंक वा पाठ समावेश गर्दछ।
अभ्यासमा, एसईओ पेशेवरहरू एक खैरो क्षेत्रमा काम गर्दछन् जहाँ प्रयोग गरिएका प्रविधिहरू स्पष्ट रूपमा सेतो टोपी एसईओ वा कालो टोपी एसईओ हुँदैनन्। यसले ग्रे प्रकारको एसईओ भनिने अर्को प्रकारको एसईओको जन्म निम्त्याएको छ। यदि अनुभवी पेशेवरले राम्रोसँग प्रयोग गरेमा यो प्रभावकारी हुन सक्छ। प्रयोग गरिएका प्रविधिहरूमा पुरानो डोमेनहरू खरीद गर्नु, नक्कल सामग्री, क्लोकिaking, लि links्कहरू खरीद गर्ने र सामाजिक मिडियालाई स्वचालित गर्ने समावेश छ। खैरो टोपी एसईओले पहिले केही ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्दछ, तर यो विरलै रहन्छ किनभने साइट अन्तत: समातिन्छ।
ग्रे टोपी एसईओ को मुद्दा विवादास्पद छ किनकि यो कानूनी तर नैतिक रूपमा संदिग्ध छ। केही व्यक्तिहरूको तर्क छ कि ग्रे एसईओ अवस्थित छैन किनकि यो केवल कालो टोपी एसईओ कम स्पष्ट प्रकारमा छ। खरानी टोपी एसईओ किफायती मूल्य निर्धारण संग आउन सक्छ तर प्रयोग प्रविधिको शंकास्पद छन्। सामान्यतया, SEO प्रदायकहरूले यी प्रविधिहरू लक्ष्य (उच्च साइट रैंकिंग) प्राप्त गर्न प्रयोग गर्छन् तर कम लागतमा र कम समय प्रयोग गरेर।
तपाईको प्राथमिकता के हो: द्रुत र सस्तो तर अप्रत्याशित खोज रैंकिंग वा ढिलो तर वास्तविक, साइट र व्यवसायको दीर्घकालीन विकास? के कालो टोपी प्रविधिको प्रयोग गर्ने जोखिम लिन लायक छ? यी केहि प्रश्नहरू हुन् जुन साइट मालिकले कुनै प्राविधिक वा एसईओ प्रकारमा बसोबास गर्नु अघि आफैलाई सोध्नु पर्छ। एक भरपर्दो SEO सेवा प्रदायकहरूले तपाईंलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन मद्दत गर्नुपर्दछ। एसईओ को प्रकार को बारे मा ज्ञान संग, तपाइँ महंगा गल्ती गर्नबाट जोगिन आफ्नो साइट र व्यापार को बारे मा सूचित निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।